Austria na -agbagha ndị Eurofighters ka ha gbochie ụgbọ elu Hungarian dị egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Austria na -agbagha ndị Eurofighters ka ha gbochie ụgbọ elu Hungarian dị egwu
Airlines • Austria na -agbasa ozi ọma • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Safety • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Austria na -agbagha ndị Eurofighters ka ha gbochie ụgbọ mmiri Hungary na -adịghị mma
Dị ka ọnụ na -ekwuchitere ndị na -ahụ maka nchekwa Austrian si kwuo, ụdị ihe ahụ emebeghị na Austria n'ime afọ iri abụọ gara aga.
Ihe mberede ụgbọ elu NATO kọwara dị ka nnukwu ihe iyi egwu maka nchekwa ụgbọ elu ”.
Ụgbọ elu agha abụọ nke Ọstrịa gbaruru ụkwụ ka ha duru ụgbọ elu ndị Hungary.
Ihe ndị a mere kpalitere ịdọ aka ná ntị siri ike site na Vienna.
N'ime ihe merenụ nke Ministri Nchebe nke Austria kọwara dị ka "nnukwu ihe iyi egwu maka nchekwa ụgbọ elu," a ga -akpaghasị ụgbọ elu Eurofighter abụọ na Fraịde ka ọ ga -egbochi ma duru ụgbọ elu NATO nke Hungary nke were mkpọtụ na -atụghị anya ya n'oge ụgbọ elu emebere. .
Ihe merenụ akpalitela ịdọ aka ná ntị siri ike site na Vienna. Ministri na -ahụ maka nchekwa Austria kwuru na a na -emebi ikuku ikuku mba ahụ n'etiti oge iri atọ na iri ise kwa afọ na nkezi. N'agbanyeghị nke a, ihe omume a pụtara ìhè na mkpebi ndị agha Austria ebe ọ bụ na onye na -ekwuchitere ozi dọrọ aka ná ntị na ọ nwere ike nwee "nsonaazụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị".
Dabere na ọnụ na-ekwuchitere ndị na-ahụ maka nchekwa, Colonel Michael Bauer, ọ nweghị ụdị ihe ahụ mere na Austria “n'ime afọ iri abụọ gara aga,” na onye isi ụgbọ elu Hungary "mere omume dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala na-ezighi ezi n'okporo ụzọ."
Ọdịda a na-atụghị anya ya mere n'oge ụgbọ elu ụgbọ elu ndị agha Hungary C-17 nke Hungary nwere ụgbọ elu ụgbọ elu nke akwadoro na mpaghara Austria. NATO njirimara.
Ọ bụ ezie na ụgbọ elu ahụ abanyela na mbara igwe Ọstrịa site na ikike ikpuchi oke ikuku, ọ jiri nwayọ daa site na oke edepụtara dị n'etiti mita 10,000 na 11,000 na, ka ọ na -efefe n'Ọdọ Mmiri Attersee n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo. Salzburg, ịdị elu ya dị ihe dị ka mita 1,000.
Omume a na -emenye ndị agha Austria ụjọ, nke zigara ụgbọ elu ndị agha ka ha duru ụgbọ elu ahụ na -adọkpụ pụọ.
Ihe kpatara imi imi na mberede apụtabeghị. Ma NATO ma Hungary ekwubeghị maka ihe ahụ merenụ.